नेकपामा किन बढ्दै छ असन्तुष्टि ? कहाँ अल्झियो तल्ला कमिटी एकीकरणको गाँठो? - Saptakoshionline
नेकपामा किन बढ्दै छ असन्तुष्टि ? कहाँ अल्झियो तल्ला कमिटी एकीकरणको गाँठो?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र १९, २०७५ समय: ८:०२:५०
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा जनवर्गीय संगठन र तल्ला कमिटिको एकीकरणको मुद्धा पेचिलो बन्दै गएको छ । पछिल्ललो समय पार्टी भित्र देखिएको असन्तुष्टिका कारण भदौ १९ र २० को लागि बोलाइएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक पुनः एकहप्ता पछि सारिएको छ । हुनत बिम्स्टेक बैठकको हवाला दिएर भदौ ८ र ९ कालागि बोलाइएको स्थायी कमिटि बैठक १९ र २० का लागि तय गरिएको थियो । तर बैठक पुन स्थगित भएको छ । पटकपटक स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेकोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन ।
बैठकको तयारीका लागि सचिवालय बैठक नबसेको भन्दै भदौ २७ र २८ गतेका लागि स्थायी समिति बैठक सारिए पछि तल्ला कमिटीहरु एकीकरणकोलागि गठित
कार्यदलले वुझाएका प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि रहेकै कारण पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले बैठक पछि सार्नु भएको हो नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए । पछिल्लो समय सरकारको कामकारबाही तथा पार्टीको जिल्ला तथा भ्रातृ संगठनको एकता विषयमा छलफल गर्न नेताहरुले बैठक माग गर्दै आएका छन । तर, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक बैठक टारेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
विभिन्न जिल्ला कमिटीको एकतामा तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलार्ई योजनावद्ध रुपमा पाखा लगाइएको भन्दै नेकपामा असन्तुष्टि चुलिएको छ वरिष्ठ नेता नेपालले कार्यदलले गरेको त्रुटी नसच्याइए समानान्तर कमिटी गठन गर्ने चेतावनी दिए संगै नेकपा भित्र तरंग पैदा भएको छ । पूर्व एमाले मात्र होइन, माओवादीका नेताहरुले पनि जिल्लाबाट आएको सिफारिस एकतर्फि रहेको भन्दै आन्तरिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराएपछि नेतृत्व केही झस्किएको छ । जिल्ला कमिटी एकीकरणको लागि पार्टी नेतृत्वले मापदण्ड बनाउनुपर्ने मत राखेपछि प्रकृया लम्बिने देखिन्छ । जिल्ला कमिटीहरूको एकताका लागि बनेको एकता कार्यदलको म्याद पनि भदौ पहिलो साता नै सकिएको थियो । यसबारे निर्णय गर्न तत्काल नेकपाको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बैठकलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् ।
पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि सम्वाद पातलिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । नेकपामा ओली नेतृत्वको सरकारको कामकारबाहीको समीक्षाको माग पनि नेताहरुले गर्दै आएका छन । पार्टीको प्रष्ट बहुमत र दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी नभएको नेकपाका धेरै नेताहरुको मत छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाउन चासो दिएका छैनन भन्ने आरोप दलका नेताहरुले लगाउन थालेका छन । ‘आज भनिएको स्थायी कमिटी बैठक भदौ अन्तिम साता भनिएको छ । तर, त्यो पनि बस्नेमा शंका छ’ पार्टी अध्यक्ष ओली बैठकबाट भागिरहेको भन्दै स्थायी कमिटीका एक नेताले भन उता नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अहिले अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनी भोली मात्र स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उता नेपाल फर्किन नपाउँदै अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारत जाने कार्यक्रम तय छ । प्रचण्ड पाँच दिने भ्रमणका लागि भदौ २२ गते नयाँदिल्ली जाने कार्यक्रम छ । उनी फर्किए लगतै नेता प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणा मान्न नेताहरुको टोली चीन जानेछ ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली २९ गते जाने कार्यक्रम छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतबाट फर्किए लगतै फेरि १० दिनको अन्तरालमा चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ । पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको विदेश यात्राले पनि नेकपाका तल्ला कमिटी एकीकरणको प्रकृयालाई प्रभावित पर्ने देखिएको छ । तल्ला तहमा देखिएको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्वोधन नगरिने हो भने पार्टी मिले पनि मन मिल्न नसक्ने स्थितिको संकेत गर्दैछ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेल्ने रणनीति बनाइएको खण्डमा नेतृत्वले भनेको जस्तो समृद्धि हासिल गर्नको लागि सरल र सहज हुने देखिदैन । दुई ठूला पार्टी एकीकरण गरेर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको ध्यान नेपाल तर्फ केन्द्रीत गर्न सफल नेताहरुले तल्ला कमिटी एकीकरणमा गुट र आसेपासेलाई मात्र अवसर दिन खेजियो भने भविष्यमा परिणाम राम्रो ननिस्कने नेकपा कै नेताहरु भन्छन ।